Vidio: Nọgidenụ, Na-emeri, Na-eto eto na Mmekọrịta | Martech Zone
Vidio: Nọgide, Na-emeri, Na-eto eto na mmekọrịta
Fraịde, Ọgọstụ 2, 2013 Thursday, July 10, 2014 Douglas Karr
Otu igodo nke anyị matala n’achụmnta ego anyị bụ na otu ụdị ndị ahịa dị mkpa maka ihe ịga nke ọma onye ahịa yana nke anyị. Offọdụ n'ime ya metụtara akụnụba, ụfọdụ na ụlọ ọrụ ha nọ na ọtụtụ n'ime ya bụ mmata nke uru na ịlaghachi na ntinye ego. Anyị bụ nanị 5 afọ na ọnwụnwa na mbụ afọ ole na ole bụ na-na ihe ọ bụla ahịa na ike banye a ego. Anyị anaghị eme nke ahụ ọzọ… anyị na-akpachara anya banyere onye na-ewe anyị n'ọrụ.
Na ọkwa buru ibu, ekwenyere m na nke a bụ isi ihe na ịga nke ọma ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwagide onye ọ bụla na nkwekọrịta, mgbe ahụ nsogbu nsogbu na-enye ha nsogbu, ntụgharị ndị ahịa, ịgba ụgwọ na esemokwu ọrụ, yana ịkọwapụta atụmanya.
Right Na mmekọrịta bụ onye nkwado na anyị bụkwa ezigbo ndị enyi na ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ụlọ ọrụ achụmnta ego na-achọ ngwa akpaaka ahịa, a na-etinyekarịkarị uche na ndu ọhụụ, ọwa mmiri na ntụgharị. isi etinyere, na-enye ụzọ ụfọdụ firmagraphics ma ọ bụ omume hiwere isi n'ebe ndị atụ ụtụ magazin… ma enwere nnukwu ọdịiche na ọgụgụ isi ha.
Na ọdịiche bụ na ọtụtụ akpaaka usoro ịchọta ndị nwere ike ịdị njikere ịbanye… ma adịghị n'ezie tụnyere ha gị ugbu a ahịa omume na àgwà. Ha anaghị etinye uche na omume na njirimara nke ndị ahịa gị ugbu a. Anyị niile maara na ọ bara uru karịa idobe onye ahịa ugbu a karịa ịga ịchọta ma banye na nke ọhụrụ.
Ire ahia abughi onu ogugu ndi nleta, ndu ma obu mgbanwe igha nwere. Nnukwu ahia bụ ịghọta ndị ndị ahịa gị bụ, ịchọta ihe dịka ha, na-eme ha obi ụtọ, ma na-eto mmekọrịta ha na ha. Right On Interactive na-ekwu ya n'ụzọ zuru oke… Nwee, Nọgide, Na-eto.
Budata Akaụntụ Na Ntughari Ebook, Gịnị bụ Lifecycle Marketing ugbu a!
Tags: Ntinye 3dakpaakanjigide ndị ahịaNdụ ahịa ndụnjigidenri na mmekọrịtaakara
Social Research na Revenue
Ihe Facebook masịrị na-egosi banyere anyị
Aug 2, 2013 na 10: 44 AM
Daalụ Douglas, aga m elele nke a.